2019 Black Friday & Q4 Facebook Ad Playbook: Sida Loogu Haboon Yahay Markii Kharashku Kordho | Martech Zone
Xilligii dukaamaysiga ciidaha ayaa inagu soo food leh. Xayeysiistayaasha, Q4 iyo gaar ahaan usbuuca ku xeeran Black Friday waa mid aan ka duwaneyn waqtiga kale ee sanadka. Qiimaha xayeysiiska ayaa caadi ahaan kor u kaca 25% ama ka badan. Tartanka tayada alaabtu waa mid adag.
Xayeysiiyeyaasha 'Ecommerce' ayaa maareynaya waqtigooda kor u kaca, halka xayeysiistayaasha kale - sida cayaaraha moobiilka iyo barnaamijyada - ay rajeynayaan inay sanadka kaliya xiraan.
Dabayaaqadii Q4 waa waqtiga ugu mashquulka badan ee dukaamada, marka ma ahan sida kuwa kale ee xayeysiiska ahi u deggan yihiin. Laakiin xayeysiinta Facebook waxay si gaar ah u tartameysaa laga bilaabo Oktoobar illaa iyo Diseembar 23rd. Laakiin inkasta oo Xayeysiiska Facebook qiimuhu kor ayuu u kacay inta lagu gudajiray dabayaaqadii Q4, wali waa madal ugufiican magaalada. Inta badan xayeysiiyayaasha waaweyn ayaa si xarago leh u dalban doona.
Xitaa iyada oo sicir bararku jiro, inta badan xayeysiiyaasha ecommerce ayaa sifiican u shaqeeya. Daraasad dhowaan ka timid Ka adeegso dukaameeyaha waxay muujisay in suuqleyda ecommerce ay dhahaan xayeysiimaha Facebook waa kanaalada ugu waxtarka badan uguna cusub helitaanka macaamiisha inta lagu jiro fasaxyada.
Dabcan, layaab malahan in sanad walba xayeysiimaha ay qaali ka noqdaan agagaaraha Black Friday, Cyber ​​Monday, iyo dhamaan ciidaha Diseembar. Xayeysiiya kasta wuu ogyahay tan. Kaliya waxay la galaan xilli iyagoo waji geesinimo leh si kastaba ha noqotee, iyagoo diyaar u ah inay sare u qaadaan si ay u garaacaan bartilmaameedyadooda sanadlaha ah. Qof kasta oo waligii eegay barta xayeysiiska ee Facebook xilliyada ciidaha waa inuu liqaa buro dhuxul ah markay eegeen qiimahooda guji kasta.
Iyo hubaal ku filan: 80% suuqgeyaasha ecommerce waxay yiraahdaan "kordhinta kharashka xayeysiinta" ayaa walwal ka qaba suuqgeynta fasaxa.
In kasta oo kharashka iyo tartanku socdo, Q4 waa fursad ballaaran. Tafaariiqleyda, waa fursad ay ku weyneyso xilliga iibsiga ugu fiican sanadka. Ciyaaraha mobilada iyo barnaamijyada, ciidaha ayaa ka horeeya xilliga xayeysiinta ugu kharash jaban sanadka iyo waxa noqon doona CPM-yada ugu hooseeya ee 2020.
Si lagaaga caawiyo inaad xilliga socoto, halkan waxaa ku yaal shan Ku xayeysiinta Facebook dhaqamada ugu fiican loogu talagalay dhammaadka Q4:
1. Maaree Isbedelada Istaraatiijiyadeed ee Adve Wave Wave.
Si sax ah ayaa loo qabtay, kor u qaadista illaa xayeysiinta fasaxa waxay noqon kartaa mid muhiim u ah ciidaha laftooda. Xayeysiiyayaashu waxay ka faa'iideysan karaan dib-u-habeynta, liisaska emaylka, iyo wadiiqooyin kale oo kharash badan waxtar u leh wixii ka dambeeya Diseembar 8th - if Waxay kor u qaadeen ololahooda si sax ah kahor.
Laakiin ha dhayalsan kor u kaca dukaamaysiga kadib-Kirismaska. Qof kastaa wuxuu jecel yahay inuu ku dhufto lacagtiisa kirismaska ​​oo uu iibsado wixii Santa uusan u keenin. Taasi waa sababta muddada ka dambaysa 26-ka Diseembar ay si gaar ah waxtar u yeelan karto. Qaado waqtigan si aad u tijaabiso xayeysiisyada qalabka cusub (sida iPhone 11), fiidiyoow, iyo fariin cusub / hal abuur leh. Ha u istaagin illaa Janaayo 15keeda ama xitaa Maalinta Jacaylka. Qaar badan oo xayeysiiyayaal dhaqameed ah ayaa dib u laabaya xayeysiintooda bilowga sanadka, iyagoo ka tagaya daaqad kale oo wanaagsan oo fursad u ah inteena inteeda kale.
2. Kordhi Cabirka Amarka Celceliska.
Goorma kharashka helitaanka isticmaalaha kaca, waxaad leedahay laba ikhtiyaar oo lagu ilaalinayo macaashka: yaree qarashka dusha / alaabta, ama sare u qaad cabirka dalabka. Nasiib wanaagse, kordhinta qiyaasta dalabku waxay dhammaystireysaa waxa ka socda Q4 si wanaagsan - dadku waxay ku bixinayaan wax badan, labadaba naftooda iyo kuwa kale.
Waxaa jira siyaabo fara badan oo lagu kordhiyo cabbirka qiyaasta celceliska:
U fidinta astaamo dheeri ah qiimo dhimis
Adeegsiga qiimo dhimis $-bixin ah (“ku bixi $ X, hel $ off” dalabyada)
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad ka booddo istiraatiijiyaddan isku-celceliska cabbirka gebi ahaanba, sidoo kale. Waxay kuxirantahay shirkadaada iyo xaaladaada, waxay macno yeelan kartaa inaad lasocoto hogaamiyaha luminta Q4 oo aad u adeegsato dhismaha saldhiga macaamiishaada.
Haddii aad si wanaagsan u maamusho istiraatiijiyadda hoggaamiyaha luminta, waad jebin kartaa xitaa (ama waxaad heli kartaa faa'iido aad u yar), laakiin waxaad ku dari doontaa tiro dad ah liiska iibsadayaashaada. Ku xidho taas suuqgeynta haynta wax ku oolka ah, iyo Kirismaska ​​waxay noqon kartaa fursad fiican oo aad ku hesho macaamiil badan oo cusub intii aad kari karto.
3. Sug Suga Ama Hel Jeebabka Waxqabadka.
Dabcan, qof kastaa kuma jiro e-commerce. Haddii aad sameyso suuq-geyn barnaamij ama jiil horseed ah, ciidaha waxay soo bandhigaan dhibaato aad u kala duwan.
Xayeysiistayaasha Facebook ee aan ku jirin e-commerce, waqtiga ugu fiican ee lagu kordhin karo kharashka inta lagu jiro rubuca afaraad waa inta udhaxeysa Oktoobar 1st illaa Thanksgiving. CPM-yada ayaa kordha waqtigaas, laakiin ma badna. Kadibna waxaan kugula talineynaa inaad dib u dhigto ama aad u wareejiso kharashka inta udhaxeysa Nofeembar 28th illaa Diseembar 10.
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin kale oo kaa caawinaya inaad la dagaallanto qiimaha kor u kaca inta lagu jiro kor u kaca qiimaha CPM:
Haddii aad lacag qarashgareyneyso rubuca afaraad oo aadan aheyn shirkad ganacsi, isku day inaad hore u qarash gareyso inta ugu macquulsan bilaha Oktoobar iyo Nofeembar.
Diirada saar suuqyada tartanka yar inta lagu jiro xilliyada baahida badan.
U qoondee miisaaniyad badan Android. Waxay u egtahay inay aragto kororka qiimaha oo aan si cad loo shaacin.
Ka faa'iideyso xogta ololeyaasha caalamiga ah si kor loogu qaado EMEA (Yurub, Bariga Dhexe, iyo Afrika), APAC (Aasiya-Baasifik), iyo LATAM (Latin America) halkaasoo tartanka ciidaha uusan aad u xooganeyn.
laga bilaabo 2019 Q4 NA (Waqooyiga Ameerika) Buugga Ciyaaraha Fasaxa ee PDF
Qiyaasta kor u qaadista adduunka oo dhan adoo adeegsanaya qiimeynta qiimaha si aad ugu kordhiso suuqyada adduunka, isla mar ahaantaana aad ugu fiicnaatid qiimaha ugu hooseeya ee iibsiga. Taasi waxay u egtahay inay ilaaliso ROAS inta ay sii wadayso ballaarinta.
Cilmi-baarista Facebook ee qaabdhismeedka cusub ee Iskeelka (S4S) ayaa muujisay in gudbinta dejinta xayeysiinta ay xasilloon tahay marka xayeysiinta la gaaro ugu yaraan 50 beddelaad gaar ah usbuucii. Waxay heleen xiriir toos ah oo udhaxeeya xayeysiinta xayeysiinta ah ee gaareysa muggan, hoos udhaca CPAs, iyo ROAS xoogan. Mararka qaarkood hagaajinta ROAS way ka badnaan kartaa 25%.
Ku bilaw waxyar qandaraaska ROAS Ugu Yar, laakiin isticmaal. Xaraashka ugu yar ee ROAS wuxuu u oggolaanayaa xayeysiistayaasha inay ku soo daraan dib u soo celinta ay doonayaan ee ku baxa qarash gareynta xayeysiis kasta. Waad dejin kartaa ugu yaraan ROAS oo leh tiro ka weyn 0.01%, markaa Facebook ayaa joojin doonta bixinta xayeysiiskaaga haddii aysan garaaci karin boqolkiiba intaas la cayimay. Waxay u shaqeysaa sida ugu fiican haddii aad bilowdo inaad tijaabiso hadaf yar oo ROAS ah (<1%) oo ka dhan ah dhagaystayaasha ballaaran, ka dibna kor u sii qaad kororka haddii waxqabadka uusan jirin (1%, 2%, iwm). Ha ku bilaabin meel sare oo dib ha u qiyaasin; ugu yar ROAS wuxuu u shaqeeyaa si ka wanaagsan sidii loo kordhin lahaa.
U isticmaal AEO iibsiga Buugga. Haddii aad la kulantid hoos-u-dhigid ama beddelaad tayo hoose leh oo leh gawaarida gawaarida, tixgeli inaad u weeciso dalabyo caqli-gal ah oo tartan (qiimaha ugu hooseeya ee dalabka) Xaaladaha dalabyada aan la saadaalin karin sida xilliyada ciidaha, dalabyada caqliga badan ayaa ah hab wanaagsan oo lagu ilaaliyo gaarsiinta xasiloon.
Qorshee wax intaa ka badan cusbooneysiin hal abuur badan ilaa la dagaallama daal abuurka. Waxay u badan tahay inaad horey u sii qorsheyso tan, maadaama shaqaalaha badankood ay rabaan ugu yaraan xoogaa fasax ah maalmaha fasaxa. Ama, haddii loo baahdo, u fiirso lamaane hal abuur leh ballaadhi awoodda.
In la sameeyo fasax hal-abuur leh si loo kordhiyo dhibcaha ku habboon. Tani waxay kaa caawin kartaa yareynta qaar ka mid ah kharashyada badan ee xayeysiiska fasaxa.
imtixaanka Xayeysiimaha la ciyaari karo ku saabsan Shabakadda Dhageystayaasha si loo wado hawlo badan oo tayo sare leh. Facebook wuxuu sheegay in xayeysiisyadan ay helayaan waxqabadka ugu wanaagsan ee nooc kasta oo xayeysiis ah hadda.
Nasiib wanaagse, maalmaha qaaliga ah way dhaafaan. Ku dhowaad sida sixirka, Diseembar 26th, qiimaha ayaa hoos u dhacaya. Intooda badan suuqleyda ganacsiga waxay isticmaaleen miisaaniyadoodii, waxay iibiyeen tirakoodi, waxayna tixgelinayaan sanadkii la qabtay.
Tani waa marka suuqleyda aan ganacsiga ahayn - sida ciyaaraha iyo barnaamijyada moobiilka - ay leeyihiin waqtigooda. Waxay ku raaxeysan doonaan qaar ka mid ah CPM-yada ugu waxtarka badan sanadka laga bilaabo Diseembar 26-keeda illaa iyo Maalinta Jacaylka ee Febraayo 14, 2020.
Ka faa'iideyso hoos u dhaca CPI-yada iyo qulqulka alaabada laga bilaabo Diseembar 26-keeda illaa Maalinta Jacaylka adoo isticmaalaya Iibinta Xaraashka. Ka dib Kirismaska ​​sidoo kale waa wakhti fiican oo lagu bartilmaameedsado isticmaaleyaasha aaladaha cusub, iyo hal-abuurka aaladaha khaaska ku ah ayaa badanaaba kaa heli kara barar dheeraad ah oo ku habboon. Dabcan, haddii aad rabto inaad ku guuleysato qandaraaska inta lagu jiro maalmahan sixirka, waa inaad meel dhigtaa miisaaniyad ka hor waqtiga.
Qof kastaa wuu ogyahay taraafikada moobiilku hadda inay ka badan yihiin taraafikada desktop-ka. Laakiin suuqleyda badan ayaa wali aaminsan taraafikada mobiladu ma beddelaanAma uguyaraan taasi aysan u rogin sidoo kale taraafikada desktop-ka.
Taasi run ma sii ahaan karto.
Daraasad ah Xayeysiiska Google Shopping ayaa shaaca ka qaaday koror baaxad leh oo ku yimid sicirrada moobiilka dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Heerarka beddelashada ee dadka wax iibsanaya ee bilaabaya iyo joojiya safarada iibsadaha ee qalabka mobilada ayaa kordhay 252%.
Laakiin sug… waxaa jira wax badan:
Wadada dadka wax iibsanaya ay ka bilaabayaan raadintooda miiska isla markaana ay ku dhameystirayaan iibsashadooda mobilka ayaa kor u kacay 259% sanadkiiba.
Si kale haddii loo dhigo, dadka qaar waxay doorbidaan inay ka baaraan taleefanka gacanta halkii ay ka isticmaali lahaayeen desktop.
Dabcan, taasi waa Google Shopping, maahan xayeysiiska Facebook. Laakiin Facebook waxay samaysay cilmi baaris u gaar ah. Waxay sidoo kale ogaadeen in dadka isticmaala mobilada ay noqdeen kuwa ka dukaameysta mobilada.
5. Adeegso Video.
Haddii aad dib uga laabanaysay maalgashiga fiidiyowga ama aad wax badan ku maalgelin lahayd fiidiyowga, waxay noqon kartaa cirifka aad ugu baahan tahay Q4 2019.
Ku dhowaad 1dii macaamiil mobiil ah ee Maraykanka wax laga weydiiyey ayaa yidhi fiidiyowgu waa habka ugufiican ee lagu ogaado waxyaabaha cusub.
Cilmi baarista Facebook
Marka, haddii aad rabto inaad hesho iibsadeyaal badan, samee fiidiyowyo badan - labadaba Facebook iyo Instagram. Haa, Virginia, weli waxaa jira wakhti ku filan oo lagu helo videos ka hor fasaxyada waaweyn ee wax iibsiga.
Sidee shirkaddaada ama hay'addaadu u maareyn doonaan Q4 kordhinta xayeysiiska Facebook? Xeeladahaaga Q4 si fiican ma u shaqeeyeen sanadkii hore? Ka fikir meeshaad tagtay si aad istiraatiijiyad ugu samayso halka aad u socoto. Kaliya si dhakhso ah u fikir; Jimcaha Madow ayaa inagu soo food leh.
Tags: xayeysiiska qarash gareeyajilicsan madowguntinhelitaanka macaamiishaciidaha Diseembarxayeysiiska facebookxayeysiiska facebookxayaysiisyada ciyaarahaxayeysiiska wax iibsiga googlefasaxa cpmQaab dhismeedka Miisaanka